Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews) (Read 450595 times)
« Reply #220 on: October 30, 2009, 11:52:41 AM »
Can happen in LONDON also
7123_304236540197_509475197_9487513_596390_n.jpg (58.51 kB, 604x397 - viewed 423 times.)
« Reply #221 on: October 30, 2009, 01:16:06 PM »
Quote from: khatee on October 30, 2009, 11:52:41 AM
Lau yo ta kathmandu jastai dekiyo ....
Tempo ma sararaaa.........
« Reply #222 on: October 30, 2009, 01:17:39 PM »
Yo chai sabai thauma hune kura Nepal ma bharkhar suru bhayachha......
साथीसँग यौन शिक्षाका कुरा
अमृता अनमोल (taken from Kantipur)
बुटवल, २०६६ कार्तिक १३ - उमेरसँगै कौतुहल पनि बढ्दै जान्छ । झन् स्कुल/क्याम्पस पढ्दाको उमेरमा त ? 'बुझेर/नबुझेर यौनका विषयमा बढी चासो हुने रहेछ,' शनिबार एउटा समूहमा भेटिएका रामनारायण यादवले सुनाए, 'सामान्य कुरा पनि जटिल र जटिल पनि सामान्य लाग्छन् ।'
यी सामान्य र जटिल दुवैको सही व्यवस्थापन नहुँदा समस्या नहुने कुरै भएन । यस्तै समस्या समाधान गर्न यहाँका किशोर-किशोरीले साथीसँग यौन शिक्षाबारे खुलेर छलफल सुरु गरेका छन् । सबैको चासोमा पर्ने तर कमले अभिव्यक्त गर्ने यो विषयमाथि उनीहरूको चासो किन ?
'आफ्ना समस्याको पहिचान र समाधान निकाल्न,' यादवले कारण सुनाए, 'समस्या पहिचान नभए र कारण नपहिल्याए समाधान निस्किँदैन नि ।'
पश्चिम रूपन्देहीको अमुवा गाउँ उनीहरूको भेट्ने स्थान हो । समय प्रत्येक शनिबारको ठीक ११ बजे । गाउँका एक हूल किशोरकिशोरी भेलामा सहभागी हुन्छन् । गोलाकार बनेर बस्छन् र सुरु गर्छन् यौन शिक्षाका कुरा ।
उनीहरूको समूहमा प्राय १२ देखि १९ वर्ष उमेर समूहकाको बाहुल्य छ । मावि र उच्चमावि तहमा पढ्नेहरू छन् । भेलामा उनीहरू आफ्ना समस्या बताउँछन्, कौतुहल सुनाउछन् र समाधानका उपाय निकाल्छन् । आफू र आफ्नो परिवारमा हुने यौन समस्याबारे बोल्न धक मान्दैनन् ।
'कहिलेकाहीँ निष्कर्ष ननिक्लिन पनि सक्छ,' यादवले भने, 'यस्तो बेला छलफल अर्को सातालाई सारिन्छ र नजिकका स्वास्थ्यकर्मीर् तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ ल्याएर समाधान निकालिन्छ ।' यसका लागि उनीहरूले समूहको नाम तोकेका छन् अमुवाका प्रकृति साथी संवाद समूह । जसको उद्देश्य हो- किशोर-किशोरीका यौन जिज्ञासा र समस्या समाधान गर्ने ।
यसरी भेला हुने उनीहरूको अभियान सुरु भएको तीन वर्ष भइसक्यो । 'यस्तो छलफलले यौन विकृति घट्छ,' उनीहरूलाई लागेको छ, 'अझ व्यवस्थित गर्ने हो भने पाठ्यक्रममा समावेश गनर्ुपर्छ, हामीले आफ्नै उमेरका अरूलाई सही बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिने हो ।'
यौनका कुरा गोप्य राख्दा आफैँलाई घाटा हुन्छ भन्ने उनीहरू ठान्छन् । यो विषयको छलफल र बहस श्रीमान्-श्रीमतीमा मात्रै सीमित राखिनु हुन्न । तर यस्तो छलफल चलाउन सजिलो भने थिएन । 'कतिले छोराछोरीलाई छलफलकै बीचमा घिस्याएर पनि लगे,' समूहकी सुनीता खनालले तीन वर्षअघिको घटना सम्भिmइन्, 'त्यसपछि हामीले यहाँका भद्र-भलादमी, एनजीओ, आईएनजीओ सबैलाई गुहारेर अभिभावकका लागि यौन शिक्षाको महत्त्व बुझायौं ।' अहिले अभिभावक आफैँ छोराछोरीको समस्या लिएर आउँछन् ।
अमुवामा जस्तै रूपन्देहीका विकट मैनहिया, हर्नैया, रुद्रपुर, पश्चिम अमुवा, मक्रहर गंगोलिया, सेमरा मर्चवार, असुरैना, रोहिणीहवा, देवदह लगायतका एक दर्जनबढी गाविसमा पनि यौन शिक्षाका लागि किशोर-किशोरीहरूले संवाद समूह बनाएका छन् । यी सबैमा साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा यौन शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा छलफल गर्छन् । प्रजनन, पारिवारिक स्वास्थ्य, एचआईभी र लागू औषधका बारे बहस गर्छन् ।
'विवाहको उमेर, त्यसपछिको तयारी, सुरक्षित गर्भ र बच्चाको जन्म सबै विषयमा छलफल हुन्छ,' सुनीता भन्छिन् । यो अभियानको अध्ययन गरेका परिवार नियोजन संघ बुटवलका प्रबन्धक दिनेश जोशी युवामा सकारात्मक प्रभाव पारेको सुनाउँछन् । 'संकोच र विकृति हटेको छ, उनले भने, 'कुलतबाट किशोर-किशोरीलाई जोगाएको छ ।' रूपन्देहीमा करिब एक सय सत्तरीवटा यस्ता समूह छन्, जो साथीसँग यौन शिक्षाको बहस गर्छन् ।
« Reply #223 on: October 30, 2009, 11:38:05 PM »
lau budho manchhe
« Reply #224 on: October 31, 2009, 12:01:14 AM »
Quote from: tundikhel on October 30, 2009, 11:38:05 PM
lau spider man budho vayecha
« Reply #225 on: November 05, 2009, 01:01:05 AM »
आन्दोलन र मनोरञ्जन
एकिकृत नेकपा माओवादीको दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा अगाडि धर्ना दिने क्रममा कार्यकर्ताको गीतमा नाच्दै नेकपा माओवादीकी सभासद देवी खड्का। तस्विर : रमेश खतिवडा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउका क्रममा धुलिखेलमा नाचगान गर्दै माओवादी सांसद सूर्यमान दोङलगायत्। तस्बिर : मधुसुदन गुरागाईं
« Last Edit: November 05, 2009, 01:21:28 AM by tundikhel »
« Reply #226 on: November 05, 2009, 01:02:05 AM »
कास्कीको लेखनाथ फाँटमा बुधबार दाईँ गर्दै एक महिला। तस्बिर : मनोज अधिकारी
« Reply #227 on: November 05, 2009, 07:25:13 AM »
Lau yesto pani hunu hunchha ta ??
एक हप्तामा ४४ जना बालबालिका हराए
काठमाडौ‌, कात्तिक १८ - राजधानीमा एक हप्तामा करिब ४४ जना बालबालिका हराएका छन्। बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रका अनुसार कात्तिक ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म हराएका ती बालबालिकामध्ये ३२ जना भने फेला परिसकेका छन्।
हराएकामध्ये २५ जना बालक छन् भने १९ जना बालिका रहेका छन्। तीमध्ये १५ जना बालक र १७ जना बालिका फेला परिसकेको सो केन्द्रले जनाएको छ। सो केन्द्रका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मालती शाहीले चाड पर्वका बेला धेरै बालबालिका हराउने गरेको जानकारी बताए।
यसरी हराएर फेला परेका बालबालिकामध्ये कतिपयलाई गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बालगृहमा राखिएको छ भने कतिपयलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको उहाँले जानकारी दिए।सोही समयमा १० जना बेवारिसे बालबालिका फेला परेको समेत उहाँले जानकारी गराए।
हराउने तथा फेला पर्ने बालबालिकाहरुको उमेर समूह १०देखि १५ सम्मको हुने गरेको र ती बालबालिका उपत्यका नजिकका काभे्र, धादिङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लाबाट आउने गरेको समेत सो केन्द्रले बतायो। रासस
12 jana khoi ta?
« Reply #228 on: November 05, 2009, 07:42:22 AM »
« Reply #229 on: November 05, 2009, 07:48:46 AM »
यौनकर्मीसँग पनि भक्तपुरका प्रजिअले ३० हजार घुस खाए
यस तामाङ/भक्तपुर। यौनधन्दामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा लगाएका १० जनालाई भक्तपुरका प्रजिअ दीपकराज नेपालले रु. ३० हजार लिएर छाडेको खुलासा भएको छ।
गतहप्ता भक्तपुरका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा छापा मारी प्रहरीले दुई दर्जनभन्दा बढी यौनधन्दामा संलग्न युवायुवतीलाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये ठिमीको चाइनारोड रेस्टुरेन्टबाट समातिएका ७ युवती र ३ युवालाई प्रजिअले धरौटी भन्दै ३० हजार लिएर छाडिदिएको एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले जानकारी दिए।
यौनधन्दामा संलग्न रहँदै आएका ७ युवती र ३ युवाबाट प्रजिअले अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति रु. २ हजार माग गरेको समेत स्रोत बताउँछ।
भक्तपुरमा यौनधन्दा सञ्चालन गर्ने रेस्टुरेन्टमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रम तीव्र भइरहेकै बेला प्रजिअजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक मुद्दा लागेकाहरूलाई रकम लिएर मुक्त गर्नुले प्रहरी प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसअघि पनि रेस्टुरेन्टहरूमा सञ्चालित अबैध यौनधन्दामाथि प्रहरीले यसअघि पनि बेलाबेलामा छापा मार्ने गरेका समाचारहरू प्रकाशित हुँदै आएका थिए। तर यसपालिको तिहारपछि भने प्रहरीले साँच्चिकै तदारुकता देखाएको छ। गएको आइतबार मात्रै प्रहरीले सूर्यविनायकस्थित दाजुभाइ रेस्टुरेन्टबाट ५ जना युवती र दुई जना युवकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको ४ दिनपछि फेरि फ्रेन्डसिप रेस्टुरेन्ट, सल्लाघारीबाट २ जना युवक र एक युवतीलाई यौनधन्दामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो।
त्यसै गरी चाइनारोड क्याबिन रेस्टुरेन्टमा छापा मारेर प्रहरीले सञ्चालकसहित सात युवती र २ जना युवालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा लगाउने घोषणा गर्‍यो। फेरि सोमबार नै क्विन प्यालेस रेस्टुरेन्टमा छापा मारेर प्रहरीले ४ युवायुवतीलाई पक्राउ गर्‍यो।
सरसर्ती हेर्दा प्रहरीले गरेको यो कार्य निकै उत्साहजनक देखिन्छ। तर वास्तविकता भने अलि फरक छ। प्रहरीले रेस्टुरेन्टहरूमा छापा मारेर अबैध मानिएको यौनधन्दा उन्मूलन गर्ने होइन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ। केही खराब व्यक्तिका कारण प्रहरी सङ्गठनलाई नै बदनाम गराउने प्रहरी अधिकृतहरूको पैसामुखी व्यवहारका कारण यौनधन्दा उन्मूलन होइन, फस्टाउँदै गएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीका प्रहरीनिरीक्षक बलराम बिष्ट रेस्टुरेन्टमा यौनव्यवसाय सञ्चालन गरेबापत पैसा उठाउँछन्। प्रहरीहरूले सबै रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूलाई यौनधन्दा चलाएबापत पैसा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ।
बिष्ट पैसा उठाउने निहुँमा रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा आफूहरूसँग जबर्जस्ती दुर्व्यवहार गर्ने र यौनकर्म गर्ने गरेको बताउँछन् यौनकर्मीहरू।
त्यसो त बिष्ट मात्र होइन, यहाँका एसपीसहितको मिलेमतोमा प्रहरीले रेस्टुरेन्टबाट पैसा उठाइरहेको छ। होइन भने भक्तपुरको अरनिको हाइवेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी रेस्टुरेन्टमा यौनधन्धा सञ्चालित छन्। तर किन केही रेस्टुरेन्टमा मात्र छापा मारिन्छ? प्रश्न उठेको छ। यसको उत्तर हो, जसले प्रहरीलाई रिझाउन सक्दैन उसकहाँ छापा मारिन्छ, जसले प्रहरीलाई खुसी पार्छ, उसले निःसङ्कोच यौनधन्दा सञ्चालन गर्न पाउँछ।